पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने के कारण छ ?::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | मङ्ल, साउन २१, २०७६
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई आइतबार एक कार्यक्रममार्फत् ‘बकबास गरिरहे नागार्जुनबाट निकाल्न सकिनेछ’ भन्दै धम्क्याएका छन्। लोकतन्त्रमा बोल्नै नपाइने भन्र्ने कुरा हास्यस्पद हो । हाँसी हाँसी आफ्नो राजगद्दी बुझाएर सामान्य नागरिकसरह जीवन यापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने के कारण छ ? अभिव्यक्ति अधिकार राजालाई पनि छ। अहिलेको व्यवस्था नेताहरूका निम्तिमात्र आएको होइन। यो सवैको लागी हो । यदि बोल्न पाइदैन भने यो लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र अझै ब्यवहारमा आउन सकेको छैन । नेताहरुले नागार्जुनबाट निकाल्ने धम्की दिनु लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा त्यति राम्रो कुरा होइन । सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले यो बिषयमा आर्कोश पोखेका छन । राजाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन । सामाजिक सञ्जालमा राजाले पनि बोल्न पाउनु पर्छ भनेर जनताको मत आइरहेको छ ।
अहिलेको व्यवस्थामा के शासकहरु मात्र बोल्ने र अरुले बोल्न नपाइने भन्ने छ ? त्यसो हो भने यो ब्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक ब्यवस्था मान्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिन सवै नागरिकलाई स्वतन्त्रता छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफना कुरा राख्न पाउँछन । देशका कुना कुनामा गएर जनता संग कुरा गर्न पाउँछन । कसैले राजालाई बोल्न रोक लगाउन पाउँदैन । पूर्व राजाको अभिव्यक्तिमै लगाम लगाउने छूट कसैलाई छैन। आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको उपयोग गर्न राजाले पनि पाउँछन । यो उनको अधिकारको कुरा हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आमनागरिकले जन्मसँगै पाएको स्वतन्त्रता हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुनु भनेको निरंकुशताको संकेत हो ।
सामान्य नागरिकसरह जीवन यापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्दा यति ठूलो आपत्ति किन ? किन पूर्व राजा देखि दलहरु र तिनका नेताहरु डराइरहेका छन ? के पूर्व राजाको लोकप्रियता देखी नेताहरुलाई डर लागेको हो ? ११ बैशाख २०६३ मा राजा र दलका बीचमा भएको सम्झौता यथासिघ्र कार्यान्वयन गर होइन भने जनता सडकमा उत्रने छन ।
स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निम्ति धेरै लडेर आएका छन । सबैखाले अधिकारको जननी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। त्यही भएर यसलाई सबैभन्दा मूल्यवानका रूपमा ग्रहण गरिएको छ।